မျက်နှာကြက်၊ နံရံသို့မဟုတ်ပုံးအတွင်း၌ဝှက်ထားသောကုတင်၏အတွေးအခေါ်များ | အလှဆင်
Susana godoy | | အိပ်ခန်း, အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ
တစ်ဦးရှိ အိမ်ငယ်လေးလူများစွာအတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကြီးမားသောနေရာများနှင့်ကျယ်ဝန်းသည့်အလှဆင်မှုများကိုခေတ်သစ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပရိဘောဂများနှင့်အမြဲတမ်းအိပ်မက်မက်နေသည်။ ကောင်းပြီ၊ အိမ်သေးသေးလေးနဲ့ငါတို့တွေ့ရင်ငါတို့အိပ်မက်ကိုမစွန့်ပစ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းတဲ့ဘဝအရည်အသွေးကိုပေးတဲ့ဒီမူရင်းပရိဘောဂတွေကိုသာသုံးရတယ်။ The အခန်းတစ်ခုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူပုန်းအောင်းသောအိပ်ရာ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအိမ်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်။ တစ်နေ့တာအတွင်းသူတို့လျှို့ဝှက်ထားပြီးညအချိန်တွင်ပြီးပြည့်စုံသောအနားယူရန်ထွက်လာလိမ့်မည်။
3 Ikea မှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကုတင်တွေရှိပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်အတွေးအခေါ်ကိုစဉ်းစားနေပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်ကိုမသိပါကမျက်နှာကြက်ကိုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။ ဟုတ်ကဲ့၊ အူရီရီရီသည်အတော်အတန်ထူးဆန်းသောစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်မြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ The ခေါင်မိုးပေါ်ကုတင်ခေါက် နောက်ပြီးပရိဘောဂတွေမခြိမ်းခြောက်နိုင်အောင်သူတို့အခန်းတွေကိုခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။ ဤအမျိုးအစားကိုအခန်းတစ်ခန်း၏အထက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်၎င်းတို့တွင်သံမဏိကြိုးတပ်ဆင်ထားသည့်စနစ်အပြင်လည်ပတ်မှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ဘေးကင်းစေရန်လမ်းညွှန်များရှိသည်။
အခြား မျက်နှာကျက်တွင်ဝှက်ထားသောကုတင်၏အားသာချက်များသင်သည်ထိုသူတို့ကိုအောက်သို့ဆင်းသောအခါသူတို့သည်မြေပေါ်သို့မရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်နေ့အချိန်တွင်ထမင်းစားခန်းအနေနှင့်ထိုင်ခုံများသို့မဟုတ်အလုပ်စားပွဲတစ်ခုတွင်ကုလားထိုင်များပါရှိသောစားပွဲတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုနေရာချန်ထားနိုင်သည်။ ဒါကဆန်းသစ်တဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုလား။
SMARTBett အခြေခံအိပ်ရာ ...
HOGAR24 အထုပ် ၂ စက် ...
ပြောင်းလဲနိုင်သောပရိဘောဂများသည် ပို၍ ဖက်ရှင်ကျလာသည်။ အိပ်ရာမျက်နှာကြက်မှကုတင်ကိုမည်သို့လျှော့ချနိုင်ကြောင်းမမြင်မီ၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့အခြားအခြေခံကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့ကနံရံမှာပုန်းနေတဲ့ကုတင်တွေအကြောင်းပြောနေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကနေရာကိုဆက်လက်လေးစားသွားမှာပါ၊ ပရိဘောဂတစ်ခုတည်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာပေးလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကအကြောင်းပြောသောအခါ နံရံပေါ်မှာအိပ်ရာခေါက်, ပရိဘောဂ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုသတိရလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အနားယူရာနေရာကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အဲ့ဒါပဲ! ဗီရိုဒါမှမဟုတ်ဘေးဘောင်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဘယ်လိုကုန်ကျမလဲဆိုတာကျနော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ဟုခေါ်သောကိရိယာသည်အလိုအလျောက်စက်ကိုချနိုင်ပြီးမြှင့်တင်နိုင်သည့်တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ပုံမှန် living ည့်ခန်းသုံးပရိဘောဂများကိုအိပ်ရာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပုံကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကိစ္စရပ်အများစု၌သူတို့သည်လုံးဝသတိမပြုမိဘဲနေသွားနိုင်သည်။aည့်ခန်းကိုသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်တာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါအံ့သြစရာအချက်ကသင့် guests ည့်သည်တွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါ စျေးပေါတဲ့ပရိဘောဂဝယ်Ikea သည်အမြဲတမ်းစိတ်ထဲပေါ်လာသည့်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပုန်းနေသောအိပ်ရာများကိုရှာလျှင်သင်နှင့်အနီးဆုံးစတိုးဆိုင်တွင်လည်းသူတို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်ဟုဆိုရမည်။ ၎င်းတို့တွင်ပိုမိုရိုးရှင်းသောပုံစံရှိသော်လည်းလက်တွေ့လည်းရှိသည်။ ကောင်းသောအဖြူဗီရိုကိုခံစားနိုင်ပြီးအိပ်ရာ 90 × 200 အိပ်ရာထွက်ပါမည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါဟာအခြေခံ option တစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပြီးပြည့်စုံသောမေးခွန်းတစ်ခုခု၏အိပ်ရာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့တိုက်ခန်းကိုမယူပါဘူး။
ဧည့်ခန်းဖြေ - ငါတို့မှာအိမ်သေးသေးလေးရှိရင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကုတင်တွေကိုဘယ်မှာထားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်။ places ည့်ခန်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမ ဦး ဆုံးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆိုဖာကုတင် သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအနားယူရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။ အညီအမျှအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းဖုံးကွယ်ထားသည့်ပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်တီဗီပရိဘောဂများသည်အဓိကပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလားတူစွာကြီးမားသောဘေးဘောင်များသည်လည်းအခြားအရာတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်
လူငယ်ခန်းများဖြေ။ ။ အခန်းထဲမှာ၊ လူငယ်သို့မဟုတ်ကလေးများနှစ်ဆ။ ထို့ကြောင့်ဤအမျိုးအစားပရိဘောဂတစ်မျိုးကိုတပ်ဆင်သင့်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏နှစ်ဆလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုများဖြေ။ ။ မင်းကအဲ့ဒီနေ့အတွက်ပဲ အလုပ်သို့မဟုတ်လေ့လာမှု၏အရပျ။ ဤနည်းအားဖြင့်စာအုပ်များသို့မဟုတ်စာတမ်းများကိုစုစည်းရန်စာအုပ်စင်များသို့မဟုတ်ပရိဘောဂများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ သို့သော်ညအချိန်တွင်သူတို့သည်ခေါက်အိပ်ရာတစ်ခုအဖြစ်သူတို့၏လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။
ဖုံးကွယ်ထားသောကုတင်များသို့မဟုတ်ခေါက်ကုတင်များသည်လက်တွေ့နှင့်မူလနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သည်ပရိဘောဂများနှင့်ပြည့်နေသောအိမ်ကိုမမြင်ရပါ။ သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား
သေးငယ်တဲ့အိမ်တွေမှာaအိပ်ရာ အလွန်အကျွံနေရာတက်ယူခြင်းမရှိဘဲရှုပ်ထွေးသည်။ ဒီပြhavingနာကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောပရိဘောဂအိမ်တွေဟာအဖြေရှာရန်ဒီဇိုင်းနာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲကြသည်။
အမှတ် decadrages, သေးငယ်သောနေရာများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကုတင်များကိုနေ့ရောညပါ အသုံးပြု၍ မရသောအခါ၎င်းတို့သည်အလွန်အဆင်ပြေသောယန္တရားအားဖြင့်ကြီးပြင်းလာကြပြီးအိပ်ယာကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ၎င်းကိုလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောအမြင့်တွင် ထား၍ ၎င်းကိုလျှော့ချလိုက်လျှင်၎င်းသည်တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားစေရန်ခြေထောက်အချို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အားသာချက်ရှိသည်မှာ၎င်းကိုမျက်နှာကြက်ပေါ်တွင် "သိမ်းဆည်းထားသောအခါ" သည်အိပ်ရာအောက်ရှိအမျိုးမျိုးသော lus အချက်များတပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်အလွန်အသုံးဝင်သောအလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်။
အခြားစျေးသက်သက်သာသာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနည်းပါးသည့်နည်းစနစ်များလည်းဥပမာ၊ Murphy ယူရိုကွန်ပျူတာ အမှတ် အိပ်ရာ ခေတ်သစ် Murphy ကုတင် ကျနော်တို့နံနက်ယံ၌ထတစ်ချိန်က၎င်း၏နေရာ၌စင်ပေါ်နှင့်အတူတစ် ဦး အသုံးဝင်သောနှင့်အဆင်ပြေစားပွဲခုံထွက်ခွာတခါအိပ်ရာပျောက်ကွယ်စေသည်။ နောက်ကွယ်မှာကျယ်လောင်သောအိပ်ရာတစ်ခုရှိသည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မပြောလျှင်မည်သူမျှမသိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အိပ်ရာ၏အရွယ်အစားနှင့်အသုံး ၀ င်မှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောမော်ဒယ်များရှိသည်။
ဒီအမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ထပ်မော်ဒယ် ခေတ်သစ် Murphy ကုတင် အိပ်ရာကိုဖယ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်တစ်နေ့တာအတွင်းအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်စေရန်၎င်းသည်အဆင်ပြေသည့်လက်တင်ကုလားထိုင်ပါရှိသည်။ ဒါကညဘက်မှာအိပ်ရာလို့ဘယ်သူထင်တာလဲ။
ကျနော်တို့အမြဲသွားနိုင်ပါတယ် ခေါက်ကုတင် သူတို့စွန့်ခွာသွားသည်ထက် ပို၍ ဂန္ထဝင် ပို၍ ရိုးရှင်းသောဗီရိုတစ်လုံးနှင့်တူသည်။ သူတို့ကိုအိပ်ရာခင်းသို့မဟုတ်တစ်ယောက်တည်း၊ နှစ်ဆကုန်တယ်တို့မှာတောင်ရှာနိုင်သည်။
ပုံများ: leblogdeco, ပျံသန်းအိပ်ယာ, decoraciondelacasa, camag.es, costco.co, tocamadera.es
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » နေရာများ » အိပ်ခန်း » အိပ်ရာခင်း
ငါစျေးနှုန်းကိုသိလိုခေါက်အိပ်ရာ 1 ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် ဟုသူကပြောသည်
sofabed2ကိုလည်းစျေးနှုန်း
ပုံးနဲ့တူတဲ့ဒီ ၉၀ ဒီဂရီခေါက်ကုတင်တွေကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ ???? အဘယ်အရာကို၎င်း၏တန်ဖိုးကဘာလဲနှင့် 90 နေရာများတွင်တည်ရှိ
MIlagros Moreno ဖာ ဟုသူကပြောသည်
ငါမျက်နှာကျက်အထိတက်ကုတင်ဘယ်လောက်ကုန်ကျဘယ်ကုတင်ဝယ်နိုင်သနည်း အဖြေကအရေးကြီးတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
MIlagros Moreno Perez အားပြန်ပြောပါ
အိပ်ရာ BedUp မှဖြစ်ပြီး၎င်း၏စျေးနှုန်းတိုင်းတာ, ချောနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအရသိရသည်အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်မှာကိုးကားမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် http://www.bedup.fr/
မင်္ဂလာပါကောင်းသောညပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်သာမန်ကြင်နာတတ်သည့်အိပ်ရာကုတင်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောပြရန်နှင့်တစ် ဦး တည်းသောလူနှစ်ယောက်သာရှိပြီး၎င်းတို့သည်သီးခြားဗီရိုတစ်ခုအဖြစ်သိုလှောင်ထားသည့်မော်ဒယ်တစ်ခုရှိမရှိသိလိုလျှင်။ ငါ့သမီးများနှင့်နေရာသေးငယ်သည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Cuernavaca Morelos သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်
convertible bunk ကုတင်၏စျေးနှုန်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်€ 2800
Marta လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ရိုးရိုးဖြူဗီရိုဗီရိုဖြစ်သည့်နောက်ဆုံးအိပ်ရာတစ်လုံးတည်းကုတင်၏စျေးနှုန်းကိုသိချင်ပါတယ်။ တိုင်းတာမှုများ၊ မွေ့ရာများပါ ၀ င်ပါက၊ အရောင်များပိုများပါကစျေးနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းတို့ကိုသိချင်ပါတယ်။
Sellex သို့မဟုတ် Elmenut တွင်ဤအမျိုးအစား၏ရိုးရှင်းသောခေါက်ကုတင်များကိုရှာနိုင်သည်။ ဒီအိပ်ယာထဲကိုကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး။ ဝင်ခွင့်ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကရေးတဲ့အချိန်ကတည်းကဘယ်သူလက်မှတ်ထိုးခဲ့လဲဆိုတာငါမသိဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ အခြေခံခေါက်အိပ်ရာခင်း၏စျေးနှုန်းကိုအဖြူရောင်ဖြင့်သိချင်ပါတယ်။
ငါလက်ဆွဲကုလားထိုင်ဖြစ်လာမယ့်အိပ်ရာကိုစိတ်ဝင်စား: "Modern Murphy ကုတင်" ငါငွေသားနှင့်ကဒ်ဖြင့်စျေးနှုန်းကိုသိရန်လိုသည်။
maria က de fatima nogueira ramos ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောည၊ ကျွန်ုပ်သည်လျှို့ဝှက်အိပ်ရာကို ၀ ယ်လိုသည်။ သတင်းအချက်အလက်၊ အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ စျေးနှုန်းကိုမည်သို့ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
maria de fatima nogueira ramos အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ဆိုဖာနှင့်စင်ပေါ်ရှိဒေါင်လိုက်ခေါက်အိပ်ရာခင်းသောစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်သိချင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Chus VD ဟုသူကပြောသည်
Chus VD ကိုစာပြန်ပါ
ကုတင်ဘယ်လောက်ကုန်တယ်၊ ဒါကစားပွဲခုံတစ်ခုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Macarena gallardo ဟုသူကပြောသည်
Macarena Gallardo ကိုပြန်ပို့ပါ
Sandra abella ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဘိုဂိုတာမှာကျွန်တော်ပါ
Sandra Abella အားပြန်ပြောပါ
ငါအာဂျင်တီးနားမှာနေတယ်။ မျက်နှာကြက်ကိုတက်မယ့်ကုတင်တစ်လုံး ၀ ယ်ချင်တယ်။ ငါအနည်းဆုံးယန္တရားနှင့် csma အားလုံးပိုကောင်းလိုအပ်လိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
YESMIN CECILIA GARCIA CORREA ဟုသူကပြောသည်
YESMIN CECILIA GARCÍA CORREA သို့စာပြန်ပါ
Jesus Castillo Lara ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုဖြတ်ပြီးနံရံပေါ်တင်ပို့နိူင်သောအိပ်ရာ၏စျေးနှုန်းကိုပေးပါ။ ငါ Saltillo Coahuila မက္ကစီကိုမှာနေထိုင်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းသက်သာစေဖို့ဒီနံရံတွေကပ်ရပ်ထားတဲ့အိပ်ရာအမျိုးအစားကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်။ Regards
Jesús Castillo Lara သို့ပြန်သွားပါ
ငါ ECUADOR မှငါသူတို့ရဘယ်မှာငါဖြုတ်တပ်နိုင်သောဗီရိုနှင့်အတူအိပ်ရာကဲ့သို့
HECTOR Mackintosh ဟုသူကပြောသည်
HECTOR MACKINTOSH အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ငါမျက်နှာကြက်မှလျှော့ချသောအိပ်ရာ၏စျေးနှုန်းနှင့်အနီရောင်ဆိုဖာနောက်ကွယ်မှထွက်လာသောစျေးနှုန်းကိုသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အံ့ !!! စရာ !!! ငါကဒီဇိုင်နာပါ မင်းကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ ???
RUBEN အန်တိုနီယို AGILA VILLA ဟုသူကပြောသည်
စူပါမော်ဒယ်များ၊ ကျွန်ုပ်သည်စင်ကာပူနိုင်ငံရှိဝှက်ထားသောအချို့ကုတင်နံရံများတွင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မက္ကဆီကို၊ ဗရာရာကူဇက်တွင်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။
RUBEN ANTONIO AGUILAR VILLA သို့စာပြန်ပါ
စပိန်တွင်ခေါင်မိုးပေါ်သို့တက်သည့်ကုတင်အတွက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးအတွက်အထူးပြုကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းကို Tu Lecho al Techo ဟုခေါ်ပြီးမက်ဒရစ်တွင်တည်ရှိသည်။